Horudhac: Manchester United vs Liverpool… (Rikoorka uu Rashford ka heysto Reds, Salah oo rikoor ku sameyn kara Old Trafford, xaaladda dhaawac ee xiddigaha Red Devils & Wax walba oo aad ugu baahantahay kulanka ugu weyn Premier League) – Gool FM
(Manchester) 24 Okt 2021. Kulanka ugu xiisaha badan horyaalka Premier League ayaa galabta dhex-maraya kooxaha horyaalka Ingiriiska ugu guulaha badan ee Manchester United iyo Liverpool.
Xifaaltanka labadan naadi ayaa gaaray heerka ugu sarreeya ee kubadda cagta Ingiriiska, waxaana ay haatan is wajahayaan iyadoo ay Reds ka sarreyso Red Devils, maadaama ay kooxda martida ah ku jirto booska saddexaad ee kala sarreynta horyaalka iyadoo leh 18 dhibcood, waxayna afar dhibcood ka sarreysaa dhiggeeda oo kaalinta lixaad kula jirta 14 dhibcood.
Manchester United ayaa la tacaaleysa dhibaatooyin dhaawac, waxaana macallinkeeda Ole Gunnar Solskjaer u sheegay inay jiraan shakiyo dhaawac la xiriira oo ku qotoma Bruno Fernandes, Fred iyo Marcus Rashford, halka sidoo kale la qiimeyn doono xaaladda Anthony Martial oo tababarka kusoo laabtay, waxaana sidoo kale la xaqiijiyay inuusan ciyaari doonin Raphael Varane oo dhaawac qaba.
Dhinaca kale, Curtis Jones ayaa kusoo laabtay tababarka Liverpool isagoo labadeedii kulan ugu dambeeyay dhaawac kaga maqnaa hase ahaatee, waxaanan soo laaban karin Thiago Alcantara oo diiwaanka dhaawacyada ku wehliya Havrer Elliott.
Manchester United ayaa kaliya hal guul gaartay 10-kii is-arag ee ugu dambeeyay oo ay horyaalka kula yeelatay Liverpool, sidaas oo ay tahay lix ka mid ah kulammadaas waxay ku dhammaadeen barbarro.
Liverpool ayaa 4-2 ku garaacday Man United oo joogta Old Trafford bishii May ee sanadkan, waxayna raadineysaa inay labo guul oo xiriir ah horyaalka Red Devils kaga soo qaadato bannaanka markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2002.
Manchester United ayaa gool looga dhaliyay garoonkeeda horyaalka iyo koobka maxalliga ah 12 kulan oo xiriir ah, waxayna qarka u saaran tahay inay barbarreyso rikoorkeedii ugu dheeraa ee shabaq-difaacasho la’aan ah Old Trafford kaasoo 13-kulan gaaray isla markaasna soo gabo-gaboobay February 1964.
Man United ayaa siddeed dhibcood ka heshay toddobadii kulan ee ugu dambeysay horyaalka ee ay garoonkeeda ku ciyaartay waxayna guuleysatay labo, labo barbarro ayay gashay, saddexda kalena waa la garaacay.
Marcus Rashford ayaa afar gool ka dhaliyay Liverpool siddeed kulan oo uu ku wajahay horyaalka, waxaana dhanka Man United kulankan kaga goolal badan kaliya Wayne Rooney oo lix gool ka dhaliyay isagoo Red Devils u ciyaaraya kulankan.
Liverpool ayaa saddex gool ama wax ka badan ka dhalisay siddeed kulan oo xiriir ah oo ay bannaanka kusoo ciyaartay tartammada oo idil, waxaana ku jira shan ka tirsan horyaalka, kooxda kaliya ee horyaalka Ingiriiska lix kulan oo xiriir ah bannaanka kusoo dhalisay saddex gool ama wax ka badan waxay ahayd Man United oo sameysay xilli ciyaareedkii hore.
Mohamed Salah oo shabaqa gaaray dhammaan lixdii ciyaar ee ugu dambeysay uu horyaalka ciyaaray ayaa saddex gool ku dhaliyay Old Trafford sanadkan labo kulan oo uu ku ciyaaray, mana jiro xiddig ka tirsan Liverpool oo saddex kulan oo xiriir ah Man United gool kaga soo dhaliyay garoonkeeda.
Mid kasta oo ka mid ah 10-kii gool ee ugu dambeeyay uu horyaalka ka dhaliyay Roberto Firmino ayaa yimid isagoo ku ciyaaraya bannaanka garoonka kooxdiisa, waxaana rikoorka goolasha ugu badan bannaanka oo aysan ku jirin kuwa garoonka ugu xiriiris badan kaliya saddex xiddig oo kale ah Ryan Giggs iyo Harry Kane (min 13) iyo Ole Gunnar Solskjaer (11).
Horudhac: Barcelona vs Real Madrid... (El Classico-dii ugu horreysay xilli ciyaareedkan oo kulmineysa da'yar ku hibeysan kubadda cagta & Jordi Alba oo...)
Waa tuma gabadha Delle Alli isagoo la socda lagu arkay ee Nicole Berry?...(Miyuu xiriirka u jaray gabadhii Pep Guardiola?)